अद्भुत संसारः १० आश्चर्यजनक र अपत्यारिला स्थान, जहाँ मान्छे जानै डराउँछन्! | Suvadin !
अचम्म, अविश्वसनीय, तर सत्य!
अद्भुत संसारः १० आश्चर्यजनक र अपत्यारिला स्थान, जहाँ मान्छे जानै डराउँछन्!
अाश्चर्यजनक सत्यहरूका बीचमा संसार चक्र लगाइरहन्छ। विश्वका सात अाश्चर्यका बारेमा चर्चा हुन्छ नै। तर, प्राकृतिक रुपमा रहेकाे संसारकाे विचित्र तस्वीरलार्इ शुभदिनले नियाल्ने काेसिस गरेकाे छ।
Nov 25, 2017 18:48
क्यालिफोर्नियाका हिँड्ने ढुङ्गा।
विनिता कार्की/उमेश दाहाल, काठमाडाैं, मंसिर ९ – विश्व आश्चर्यजनक छ। खाेज र अनुसन्धान गर्दै जाँदा अपत्यारिला सत्यहरु देखिन्छन्, भेटिन्छन्। र, त्यस्तै अाश्चर्यजनक सत्यहरूका बीचमा संसार चक्र लगाइरहन्छ। विश्वका सात अाश्चर्यका बारेमा चर्चा हुन्छ नै। तर, प्राकृतिक रुपमा रहेकाे संसारकाे विचित्र तस्वीरलार्इ शुभदिनले नियाल्ने काेसिस गरेकाे छ।
१, जापानको योनाग्युनी स्मारकः
माटो र बालुवाले बनेको स्मारककाे लम्बाई ९० फिट र चौडाइ ४९०/१३० फिट रहेको छ। आश्चर्यको कुरा, त्यहाँ दुई वटा ठाँडा स्तम्भ र एउटा विशाल तेर्सो स्तम्भ मिलेर ताल बनेको छ।
२, क्यारोलिनाको हराएको कोलोनीः
इतिहासमा उल्लेखित रहेको क्याराेलिनाकाे काेलाेनी अहिलेसम्म पत्ता लागेको मानव वस्ती हो।
३, कोष्टारिकाको पत्थर क्षेत्रः
कृषकहरुले केरा खेतीका लागि जंगल फँडानी गर्ने क्रममा पत्ता लागेको पत्थर क्षेत्र जहाँका प्रत्येक पत्थरको संरचना गोलार्इ ६ दशमलव ५ रहेको छ।
४, इटालीमा रहेको क्राइष्टको मुर्तिः
यहाँ रहेको जिसस क्राइष्टको पित्तलको मुर्ति जिसस क्राइष्टको पहिलो मुर्तिको रुपमा सुपरिचित छ। उक्त मुर्ति पहिले जमिनमा अवस्थित थियो। तर, अहिले पानीमुनि रहेको छ।
५, भारतको मानव कंकालले भरिएको तालः
यो तालमा हरेक वर्ष उत्तिकै मात्रामा मानव कंकालहरु भेटिन्छन्। जसकाे कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन।
६, चिलीको मियावोः
इष्टर आइसल्याण्डमा रहेको विशाल मानवरुपी संरचनाहरु जसकाे उचाई ३३ फिट र तौल ८६ टन रहेको छ। पूरै इष्टर आइसल्याण्ड यस्तै मानवरुपी संरचनाहरुले घेरिएको छ।
७, स्कटल्याण्डको ओभर टर्न पुलः
यो पुलमा हरेक वर्ष कम्तिमा एक कुकुरले नदीको ५० फिट गहिरार्इबाट निकालिन्छ। र, उक्त पुल सर्वाधिक आत्महत्या गरिने ठाउँको रुपमा कुख्यात छ।
८, उत्तर कोरियाको रायोग्याङ होटलः
उत्तर कोरियामा अवस्थित उक्त होटल उन्नाइसौं शताब्दीदेखि हालसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै सीमित छ। यो होटलमा १०५ तल्ला रहेका छन्। तर, उत्तर कोरियाको विदेश नीतिको कारण अहिलेसम्म कुनै पर्यटकले देखेका छैनन्।
९, इंग्ल्याण्डको स्टोनह्यान्ज सर्कलः
विशाल–विशाल पत्थरहरुलाई श्रीङ्खलाबद्ध ढङ्गले राखिएको छ। उक्त ढुङ्गाहरु टाढा–टाढाबाट ल्याइएको अनुमान गरिएको छ। तर, किन कसले र केका लागि ल्याएको भन्ने अझैसम्म खुलेको छैन।
१०, क्यालिफोर्नियाका हिँड्ने ढुङ्गाः
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेका ढुङ्गाहरु आफैँ हिँड्ने गर्दछन्। त्यति मात्रै होइन, बाटो समेत प्रत्यक्ष रुपमा देखिने गरेको छ।